श्रीमानले छाडेर मलेसिया पुगेकी सिर्जनाको आन्द्रा र पाठेघरमा क्यान्सर भएपछि १० बर्षीया छोरीको बिचल्ली - Purbeli News
श्रीमानले छाडेर मलेसिया पुगेकी सिर्जनाको आन्द्रा र पाठेघरमा क्यान्सर भएपछि १० बर्षीया छोरीको बिचल्ली
प्रकाशित मिति: बिहिबार, कार्तिक ३०, २०७४ समय: ११:४७:५५
रानीबारी, सामाखुसिमा आफ्नी एक छोरी र आमासंग बस्दै आएकि सृजना तामाङको परिवारमा सानै देखि दुख थियो । उनि छोरि भएकोले सानैमा पनि उनका बाबुबाट अपहेलित भएकी थिईन ।उनका बाबुले पनि क्यान्सरकै कारण ज्यान गुमाउनु परेको थियो । हाल उनि आन्द्राको र पाठेघरको क्यान्सरले ग्रसित छिन । यस बाहेक उनको ढाडको हड्डीमा पनि केहि समस्या रहेको उनि बताउछिन । उनि यो भन्दा अघि मलेसियामा काम गर्दै आएकी थिइन । उही बस्ने क्रममा अचानक थला परेपछी आफु नेपाल आएको उनि बाताउछिन । मलेसियामा पनि धेरै बिशेषज्ञ कहाँ जांचउपचारको क्रममा क्यान्सरको शंका गरेपछि उनि नेपाल आएकी थिइन् ।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपचार गराउदै आएकी उनि हाल अन्नपुर्ण अस्पतालमा आफ्नो उपचार गराउदै छिन । दैनिक उनको उपचारमा लगभग ३००० देखि ३५०० सम्मको खर्च लाग्ने उनको भनाई रहेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि उनका श्रीमानले भने वास्ताब्यस्ता गरेका छैनन । धेरै अघि छुट्टिएर बसेका सृजनाका दम्पत्तिको सम्बन्ध बिच्क्षेद नभएता पनि उनिहरुको सम्बन्ध भने बिच्क्षेद भए सरि नै छ । आफ्नो यस्तो बिरामी अवस्थामा मलाई आफ्नाले भन्दा धेरै टाढाका साथीले सहयोग र माया गरेका छन भनेर उनले गुनासो पोखिन ।
सृजनाको थप उपचारको लागि एक अभियान नै थालिएको छ । धरै क्यान्सर पिडित बिरामी आर्थिक अभावका कारण उपचार नपाएर आफ्नो ज्यान गुमाउने स्थिति छ । बाच्ने रहर कसलाई हुन्न र । शाश रहुन्जेल आश सबैलाई हुन्छ । क्यान्सर जस्तो जटिल रोगको निवारण गर्न धेरै खर्च लाग्ने भएकोले सरकारले पनि यस विषयमा ध्यान देओस भन्ने पनि उनको गुनासो छ ।
सुन्दा नपत्याउने, देख्दा अचम्म अदभुत बालिका (भिडियो)
मिस वर्ल्ड अप्डेट : यसरी हेर्न सकिन्छ लाईभ, मिस वर्ल्डको पेजबाट हेर्दा १ डलर, जुन भोटमा गनिने
के होला श्रृङखलाको रिजल्ट ? प्रतीक्षामा नेपाल, मिस वर्ल्ड आज ४:४५ बजेदेखी यो टिभीबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ
काठको साईकल बनाएर राजा विरेन्द्रबाट २५ सय नगद सहित सम्मान पाएका लेटाङका रार्इले बनाए धान झार्ने मेसिन (भिडियाे सहित)
‘मिस वर्ल्ड’मा अब श्रृंखलाको सम्भावना कति? VIDEO REPORT
शृङ्खलाले दिइन् नेपाल र नेपालीलाई खुशीको खवर, भोटिङ समाप्तपछी मिस वर्ल्डको टप २० मा परिन् (भिडियाे सहित)
यसरी गरियो ८ बर्षीय बालक प्रयासको हत्या, भयो पर्दाफास… (हेर्नुहोस् भिडियो)
आफ्नै पैसाले स्कुटर किनेर सरर भाईरल जोडी बखत र प्रतिभा ?(भिडियो)
इटहरी खनार स्थित लक्ष्मि फर्ममा अागलागी: नियन्त्रण प्रयास जारी (तस्विरहरू सहित)